प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - ज़ियामेन किंगह आउटडोर उत्पाद कं, लिमिटेड
कस्तो प्रकारको किंग्सहउ उत्पादन गर्दछ?
हामीसँग उत्पादनहरूको पूर्ण सूची छ जुन हामी निर्माण गर्छौं, तर हामी मुख्य रूपमा झोलामा छौं। ब्याकप्याक, डफेल ब्याग, खेल जिम झोला, उपकरण झोला, कूलर झोला आदि। हामी पनि हाम्रो ग्राहकलाई क्याम्पिंग टेंट, स्लीपिंग ब्याग, क्याम्पिing चटाई, क्याप्स / टोपी, छाता र अधिक केहि जडान वस्तुहरू निर्यात गर्दछौं।
कस्तो प्रकारको कपडा र ब्रान्डेड किंगहाउ काम गर्दछ?
पोलिस्टर, नायलन, क्यानभास, अक्सफोर्ड, रिपस्टप पानी प्रतिरोध नायलॉन, पु छाला हाम्रो सबैभन्दा सामान्य कपडा हो। मुद्रण र कढ़ाईको साथ ब्रान्ड उपलब्ध छन्। तपाईंको उत्पादन सीउन आवश्यक लगभग कुनै सामग्रीलाई सोर्सिंग गर्ने किंगहोसँग एक ठूलो सम्झौता छ। यदि तपाईंसँग विशिष्ट सामग्री आवश्यकताहरू छन् जुन हामी तपाईंको लागि यो फेला पार्न सक्दछौं।
नमूना वा अर्डरको लागि विशिष्ट सीसा समय के हो?
सामान्यतया, नमूना बनाउन -10-१० दिनहरू आवश्यक पर्दछ। कस्टम-निर्मित वस्तुको लागि विशिष्ट सीसा समय सिलाई आवश्यकताहरू, मात्रा, र कच्चा मालहरूको उपलब्धतामा निर्भर गर्दै -6--6 हप्ता हुन्छ। भीड आदेश को मामिलामा, हामी तपाईंको जहाज मिति आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दो राम्रो गर्न हामी तपाईं संग काम गर्नेछौं।
के KingHow ग्राहकको लागि उत्पादन डिजाइन वा विकास गर्दछ?
वास्तवमा, हामी ग्राहकको लागि नयाँ उत्पाद डिजाइन र विकास गर्दैनौं। तर हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई यो काम गर्न मद्दत गर्नेछौं, हाम्रो अनुभवको साथ हामी उत्पादनको बारेमा सुझाव दिन सक्छौं र उत्तम निर्णय लिनको लागि समाधानहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछौं।
के किंगहोले नमूनाहरू प्रदान गर्दछ?
नि: शुल्क नमूना सामान्य रूपमा, तर यदि एक जटिल वस्तु बनाउँदछ वा खुला मोल्ड आवश्यक छ भने, ढाँचा विकास, मोल्ड सेटअप र सामग्रीको खरीदको लागत कभर गर्न शुल्क हुनु पर्छ। जब एक अर्डर राखिन्छ, नमूना शुल्क अर्डर रकमबाट घटाइनेछ, र एक पूर्व-उत्पादन नमूना सधैं साइन-अफको लागि उत्पादन शुरू हुनुभन्दा पहिले प्रदान गरिन्छ।
अर्डरको लागि त्यहाँ न्यूनतम मात्रा छ?
एक बनाइएको-अर्डर वा अनुकूलित मुद्रित वस्तुको लागि, न्यूनतम अर्डर मात्रा १०० टुक्रा वा $ 500 हो। हामी सम्भव भएसम्म ग्राहकहरूलाई समाहित गर्ने प्रयास गर्दछौं। जहाँसम्म, यदि हाम्रो उत्पादन तपाईंको उत्पादन कुशलतापूर्वक समायोजन गर्न सेट अप गरिएको छैन, सेटअप लागतहरू कभर गर्नको लागि हामीलाई ठूलो मात्रा चाहिन सक्छ।
के किंगहोले कुनै वस्तु बनाउनको लागि आवश्यक सबै कच्चा पदार्थहरू आपूर्ति गर्दछ?
तपाईंको उत्पादको लागि कच्चा मालको खरीदसँग किंगहो धेरै लचिलो छ। हाम्रो आपूर्तिकर्ताको नेटवर्कको माध्यमबाट, हामी लागत प्रभावी मूल्यमा कुनै पनि सामग्रीको बारेमा स्रोत बनाउन सक्दछौं। अर्कोतर्फ, यदि ग्राहकले हामीलाई सामग्रीहरू आपूर्ति गर्न चाहन्छ भने, हामी तिनीहरूलाई समायोजन गर्न पाउँदा खुसी छौं। अद्वितीय हार्डवेयर वा अन्य हार्ड-टु-फेड आईटमहरूको लागि, हामी तपाईंसँग उत्तम खरीद रणनीति निर्धारण गर्न कार्य गर्नेछौं।
किंगHow लाई कुन भुक्तानी अवधि आवाश्यक छ?
KingHow ले सबै नयाँ ग्राहकहरुबाट क्रेडिट सन्दर्भको अनुरोध गर्दछ र आफ्नो पहिलो अर्डरमा काम सुरु हुनु अघि क्रेडिट जाँच गर्दछ। हामी अक्सर तपाईंको पहिलो अर्डरमा -०-50०% को तल भुक्तानी अनुरोध गर्दछौं। अर्डरको ढुवानी अघि, किंगहाउले ब्यालेन्सको लागि एक इनभ्वाइस मेल गर्दछ। पुन: अर्डरको लागि, हामी %०% जम्मा गर्न सक्दछौं र B / L को प्रतिलिपि विरूद्ध 70०% ब्यालेन्स।